मधुपर्क २०६७ कात्तिक – Page2– मझेरी डट कम
भक्त भक्तिन तिर्न
सबै समर्पण देखिने
समयको लहड कि
सपनाहरू मनमा कतै नभएपछि
सपनाहरू भोग्न नजानेपछि
सपनाहरू भुल्दै गएपछि
सपनासँग पनि –
मान्छेहरू दुख्दारहेछन् ।
तिम्रो आँसु पुछ्या रुमाल मैले धुनु पर्‍यो
सधैँ अरूकै हात खोसेर
खान पल्केका बाँदरहरू
सधैँ अरूकै भाग लुटेर
बाँच्न पल्केका बाँदरहरू
तिम्रो निषेध घोषणा
काँडाको झ्याङमा अग्ला पर्खालहरूभित्र
अर्थात् हिमालको टाकुरामा
सर्वाङ्ग फक्रिएको एउटा फूल हौ
खोटाङ जिल्लाको मलायाथुम्कीमा पातेसुङ र दिलिदुङ नामका किराँत पति-पत्नी बस्थे । उनीहरू कपासखेती गर्थे, धागो काट्थे र तानमा कपडा बुन्थे । यी किराँत दम्पत्तिका तोयामा र खियामा नामका दुई छोरी र हेचाकुप्पा भन्ने एउटा छोरा थिए । हेचाकुप्पा सानै (दूधे बालक) हुँदा पातेसुङ र दिलिढुङको देहान्त भयो । उनीहरूले मर्ने बेलामा तोयामा- खियामालाई भनेका थिए ः ‘सानो भाइलाई राम्रोसित पाल्नु-तिमीहरू सधैँ मिलेर बस्नु !’
ऊ छ । म छु अरू पनि छन् । टेम्पो खचाखच भरिएको छ । टेम्पो स्टेसनबाट गन्तव्यसम्म पुग्नका लागि केही समयका यात्रु बनेका छौँ हामी ।
घर काँ हो तिम्रो ?
निद्रा राम्रोसँग नलागेर धेरै दिनदेखि भारी महसुस भइरहेको थियो । खानामा पनि रूचि घट्दै गएपछि एकदिन डाक्टरकहाँ जाँदा “साँझ बिहान हिँड्नुस्, पानी पिउनुस्, सोचाइ कम गर्नुस् । औषधि खाइहाल्ने बानी राम्रो होइन, फेरि औषधिले रोग निको पारिहाल्छ भन्ने पनि छैन, एक महिना लगातार दुवै समय हिँड्नुस् त्यसपछि पनि सुधार नभए आउनुस् भनेपछि म औषधि बिना घर फर्किएँ । काम काम मात्र जहिले पनि, सधैं व्यस्त । समय निकालेर त्यसरी हिँड्न कहाँ पाउनु ? फेरि यो धूँवा धूलोको सहर, अव्यवस्थित बसोबास, जताततै फालिएका फोहोरका पहाड, कहाँ हिँड्नु कामको तनाव र अरू अन्य केही कारणहरूले विगत केही महिनादेखि राम्रोसँग निद्रा लागिरहेकेा छैन ।
सगुन बारम्बार एस्.एम्.एस्. गरिरहन्थ्यो तर सृष्टिबाट त्यसको प्रत्युत्तर कमै मात्र हुन्थ्यो । समय बित्दै जाँदा दुवै जनाबाट बराबर जस्तै एस्.एम्.एस्. हुन थाल्यो । साँच्चैभन्दा त एस्.एम्.एस्. दोहोरी नै हुन्थ्यो । एक पटकको शृङ्खला १३/१४ एस्.एम्.एस्. सेवाबाट मात्रै टुङ्ग्यो तर मन नलागिनलागी टुङ्ग्याउनु पर्ने बाध्यताले ।
शुक्रबार सोखिन प्रकाशनले उत्कृष्ट बालबालिकालाई पुरस्कृत गर्ने कार्यक्रममा निम्त्याएको थियो ।
सहभागीहरू ७० जनाजति रहेछन्! ती प्रायः पुरस्कृत हुनेहरूका आफन्तजस्ता थिए । समारोह हल पनि राम्रै थियो । निमन्त्रणा-पत्र अनुसार कार्यक्रम अढाई बजे सुरु भएर साढे तीनबजे सकिनु पर्ने थियो । साढे दुई बजेपछि सिटमा बसेर कार्यक्रम उद्घाटनको प्रतीक्षा गर्दै सङ्क्षिप्त अभिलेख पल्टाउन थालियो । आयोजकहरू बेग्लै धुनमा तन्किरहेका देखिन्थे । प्रतीक्षारत सहभागीहरू औँला पट्काएर हाई काढ्न थाले । बेलाबखत लघुशङ्काका लागि बाहिरिन्थे पनि ।
बच्चा जन्मेको धेरै समय बितिसक्दा पनि युवती न कुनै प्रतिक्रिया, न कुनै उत्साह नै व्यक्त गर्छे । युवतीको त्यो व्यवहार देखेर सिस्टरहरू सोझै अड्कल लगाउँछन्, “उनी कुनै गहिरो सोचमै डुबेकी छिन् ।”
रमा सिस्टरले युवतीको एकाग्रता भङ्ग गर्दै भनिन्-”होइन बहिनी, तपाईं त मुर्दाजस्तै हुनुभयो नि ! छोरो कि छोरी के जन्मियो भन्ने पनि सायद पत्तो छैन, किन यसो गर्नुभएको ?”
वातावरण सुनसान र चकमन्न छ । बाहिर हावा पटक्कै चलेको छैन, रूखका पातसमेत ओइलाएजस्ता देखिएका छन् । हप्प गर्मी छ, खट् खट् खट् खट् चलेको पङ्खाको आवाजले मौनतालाई भङ्ग गरिरहेकोछ । वरपर हिँडिरहेका मानिसका अनुहारमा पनि कुनै खुसी र मुस्कुराहट छैन । लाग्छ सम्पूर्ण वातावरण निस्तब्ध र शून्य छ ।
दया र माया दुई दिदी-बहिनीको मेलमिलाप देखेर टोलवासीहरू छक्क पर्थे तर घरभित्रका घटनाहरूबारे भने तिनीहरू अनभिज्ञ नै थिए । घरमा भाइहरूको भन्दा पनि उनीहरूको नै हैकम चलेको देखिन्छ । आमाबाबुबिहीन घरमा सासुससुराको भूमिका पनि तिनै दिदीबहिनीले निभाइरहेका टोलवासीहरूले मूल्याङ्कन गरे तर सामाजिक मानमर्यादालाई बिर्सेर भाइबुहारी माथि अत्याचार लादिएको यथार्थ घरको पर्खाल चिरेर बाहिर निस्केन । अत्याचारको सीमा नाघेपछि जेठो भाइ-बुहारी घरबाट बाहिरिए ।
फेरि भेटिएनन् तिखेमार
तिखेमार २६ वर्षको क्रोसियन युवक हो । उसको अग्लो शरीर र बान्की परेको गोरो अनुहारले जो कसैलाई पनि आकषिर्त गर्छ । उसका लागि हुरूक्क हुने केटीहरू पनि प्रसस्तै छन् तर ऊसँग विगत पाँच वर्षदेखि कुनै केटी साथी छैनन् । उसले कुनै केटी साथी बनाउने र जीवनलाई रङ्गिन बनाउने सपना पनि देख्न छाडिसकेको छ । युरोपियन समाजमा उसको उमेरका केटाहरूसँग गर्लफ्रेन्ड नहुनुलाई पनि एउटा अनौठो घटनाका रूपमा हेरिन्छ तर यो सत्य हो कि ऊसँग कुनै गर्लफ्रेन्ड छैन ।
‘त्यो खराब मान्छे हो लालबाबु’ -एक दिन वहिद काकाले सुनाए । ‘ए हो र’ – लालबाबुले टाउको हल्लाउँदै अनभिज्ञता जनायो ।
उनले मुसुक्क हाँस्दै भने -‘हो त ।’
त्यसपछि त्यो मान्छेप्रति उसका नकारात्मक सोच आयो र वहिद काकाप्रति अगाध श्रद्धा जाग्यो । धेरै सिकाएका थिए काकाले । बस्तीकाहरूको पनि सोंच त्यस्तै थियो ।
पूर्व जाने बसपार्कमा अचानक प्रमिलालाई देखेँ । केही मिनेट चिन्न सकिनँ – हो कि होइन भन्ने लाग्यो । जे जसो पर्ला भनेर म उनको नजिकै गएँ र सोधेँ – एक्सक्युज मी ? तपाईं प्रमिला जस्तो लाग्यो ।
करिब सत्र वर्षअघि प्रकाशित डा. तसलीमा नसरिनको उपन्यास ‘लज्जा’ अहिले पनि उत्तिकै लोकप्रिय र सान्दर्भिक देखिन्छ । विशेषगरी लज्जाले जहाँ कुनै पनि वाहानामा जातीय सद्भाव खलबलिन्छ वा खलबलिएको हुन्छ त्यहाँको अवस्था कति दर्दनाक हुन्छ भन्ने कुरालाई साङ्गोपाङ्ग केलाउने प्रयास गरेकाले समसामयिक राजनीतिक परिवेशमा झनै सान्दर्भिक हुनपुगेको छ । सन् १९९२ को डिसेम्बरमा भारतको अयोध्यामा घटित बाबरी मस्जिद काण्डपछि बङ्गलादेशका बहुसङ्ख्यक मुसलमानहरूद्वारा अल्पसङ्ख्यक हिन्दुहरूमाथि गरिएको अत्याचारको विषयलाई लिएर लेखिएको लज्जालाई लेखिकाले बङ्गलादेशलाई माया गर्ने सबैको हारको दस्तावेज मानेकी छन् ।
हड्सन नदीको मध्य टापुमा रहेको विशाल ‘स्टाच्यु अफ लिबर्टी’ अर्थात् स्वतन्त्रताकी प्रतिमूर्तिले संसारभरिका इमिग्रान्टलाई बिना भेदभाव अमेरिकामा बस्न सक्ने प्रेरणा दिएको पाइन्छ । मूर्तिमा लेखिएका हरफले मानवीय मूल्यमा चुनौतीको आहृवान गरेको छ । ‘तिम्रो थकान गरिबी तिम्रो चुनौती मलाई दिई यो देशलाई स्वतन्त्रतापूर्वक अबलम्बन गर स्वीकार गर’ यही लेखिएको छ । लिबर्टीको छेउमा ‘एलिस् आइल्यान्ड’ सुरुका इमिग्रान्टका लागि प्रवेशमार्ग नै रहेको थियो । नाविक मार्गबाट प्रवेश गरी त्यहाँ पुगेर स्वास्थ्य परीक्षण गरेपछि मात्र न्युयोर्क सहर छिर्न पाउँथे पहिलेका इमिग्रान्टले ।
न्युयोर्क यात्रा र थ्याङ्क्स गिभिङ डे !
थ्याङ्क्स गिभिङ डे अर्थात् धन्यवाद दिवस ! कति मीठो शब्द ! चट्ट चटनी चाटेझैँ अझ ! मह चाटेझैँ स्वादिलो ! मैले अमेरिकामा पाइला टेकेपछि नै सुनेको शब्द ! रसदार ! यस्तो अमेरिकाको ठूलो चाड म बबुरोलाई के पत्तो ! दुई-तीन दिन सरकारी बिदा ! रमाइलो वातावरण ! अमेरिकीहरूको उत्सुकताको क्षण ! चाड मनाउन अमेरिकीहरूको धेरै दिनदेखिको पर्खाइ ! हाम्रो दसैँजस्तै ठूलो चाड ! सुन्दैमा दसैँको सयपत्री फूल फक्रिएको आभास मग्मगाउँछ ।